गुल्मीमा अपहरणमा परेकी भनिएकी एक युवतीको शव फेला | Butwal Dainik
गुल्मीमा अपहरणमा परेकी भनिएकी एक युवतीको शव फेला
१६७९ पटक पढिएको
गुल्मीमा अपहरणमा परेकी भनिएकी एक युवतीको शव बारीको कुनामा फेला परेको छ ।
जिल्लाको रेसुगां नगरपालिका ३ भाडगाउँकी सम्झना खत्रीको शव घर नजिकै बारीको कुनामा भेटिएको बताईएको छ । घटनाको बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ । उनी अपहरणमा परेको भन्दै खोजीकार्य थालिएको थियो ।
गत माघ २९ गते जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका ३ भाडगाउँमा २१ वर्षकी सम्झना खत्री बोहोरालाई उनकै घरबाट केही नचिनेका युवाहरुले बेपत्ता बनाए । बुहारी हराएको खबर उनकी सासु तोमकला खत्रीले छिमेकीलाई जानकारी गराईन । खोज खबर गर्दा कतै पनि नभेटिएपछि घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा पुग्यो ।
फागनु १ गतेका दिन प्रहरीले सासु र उनका छोरा नेत्रबहादुर खत्रीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलायो र बुहारी कसरी बेपत्ता भईन भनी सोधपुछ गयो ।
केही समय हिरासतमा राख्यो घरमा सानो बच्चा भएको भन्दै सासुलाई प्रहरीले साझ घर पठायो । छोरालाई हिरासतमै राख्यो । अर्कोदिन बिहान घर नजिकै खनियाँको रुखमा ४८ बर्षीया तोमकला खत्री झुण्डिएको अबस्थामा मृत फेला परिन ।
घरबाटै बेपत्ता भएको छोरीको खोजतलास गरिदिनु पर्यो भन्दै सम्झनाको माईती मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्वर २ अमराईबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए ।
उजुरी दुई थरि बन्यो, बेपत्ता सम्झनाका पती नेत्रबहादुर खत्रीले माईतीजनले आत्माहत्या गर्न आफ्नी आमालाई बाध्य पारेको भन्दै प्रहरीमा दुरुसाहनको मुद्धा दर्ता गरे ।
अझै अचम्मको कुरा त आफ्नो छोरी खोजीदिनु पर्यो भन्दै उजुरी बाकेर आएका सम्झनाका बाबु हरिबहादुर बोहरालाई प्रहरीले पक्राउ गरि हिरासतमा राखेको छ ।
परिस्थिती जटिल बन्दै गएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समुहका जिल्ला पार्टी अध्यक्ष सोमनाथ सापकोटा नेताहरु बुद्धि जिसी, हिरा एसी , मुसिकोट ३ का वडाध्यक्ष कर्णबहादुर जिसी बिद्यार्थी नेता श्रीराम महत लगायतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवि शर्मा र एसपी प्रविण कुमार श्रेष्ठलाई घटनाको बारेमा गहिरो अध्यायन गर्न सुझाए । ‘छोरीको खोजी पाउँ भन्दै प्रहरी प्रशासन आएका बाबुलाई नै हिरासतमा लिनु यो कस्तो अचम्म । के हो यसको रहस्य ? ‘ नेताहरुले प्रश्न गरे ।
आत्महत्या नगर्दै मृतक सासुको बयान के थियो ?
बुहरी हराएको दुईदिन पछि आत्माहत्या गरेकी सासु तोमकलाले आत्महत्या नगर्दै प्रहरी समक्ष बुहारी हराउनुको रहस्य यसरी खोलिन ।
‘विहिवार राती हामीले खाना खाईसकेपछि ३ जना अपरिचीत युवाहरु घरमा आएको र बुहारीसंग घरको किचन मै बसेर बुहारी सहित चारै जनाले मदिरा सेवन गरेका हुन । विहानपख उनीहरु भागेर गए,’ उनले भनिन ।
माईति पट्टिका छिमेकी श्रीराम महतले ‘घरमा छोरा नभएको बेला त्यो पनि रातको समयमा परपरुष आउँदा छोरालाई फोन गरेर जानकारी दिन र गाउँवासीसंग गुहार माग्न पर्नेकी नपर्ने ? अर्को कुरा सासुकै सामु बुहारीले परपुरुष घरमा बोलाईन भनेर कसरी पत्याउन सकिन्छ ? ’ यो कुरा निकै कपोकल्पित जस्तो लाग्छ ।’
साथै महतले भने बुहारी हराएको मुद्दा ओझेल पार्न माइती विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा दर्ता गरिएको छ । आरोपकै भएमा बिना कुनै अध्ययन मुद्दा दर्ता गरिनु प्रहरी प्रशासनको लापरबाही भएको जिकिर गरे ।
आत्माहत्या दुरुसाहनको मुद्धा प्रहरीले निकै हतारोमा दर्ता गर्नु आपत्तीको बिषय भएको मुसिकोटका मेयर सापकोटाले प्रतिकृया दिए ।
‘यता बुहारी हराएको छ उता सासुले आत्महत्या गरिन, यो कसले कसलाई दुरुत्याहन गर्यो ? तपाईँले बुझेर दर्ता गर्नु भो कि लहडमा ?’ सापकोटाले प्रहरी प्रमुख श्रेष्ठलाई प्रश्न गरे ।
मुसिकोट नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष कर्णबहादुर घर्ति क्षेत्रीले कतै भने, ‘प्रहरीले ठुला अपराधका घटनाको मुद्धा दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने कतै भने बेपत्ता महिलाको घटना ओझेलमा पार्न माईती बिरुद्ध नै आत्माहत्याको दुरुसाहन मुद्धा दर्ता गर्ने ? यस्तो पनि न्यायसंगत हुन्छ र ।’
सम्झनाका पतिप्रति आशंका
सम्झनाका पति गाडी चालक हुन । मुसिकोट साईडमै गाडी चलाउने क्रममा तम्घासको शिद्धबाबा माविमा कक्षा ११ मा पढ्दै गरेकी मुसिकोट गाउँकै सम्झना बोहरालाई प्रेम गरी तीन बर्ष अघि भागि बिबाह गरेका थिए । उनीहरुको १५ महिनाको छोरा समेत छन ।
मायाप्रीती लाएर विवाह बन्धनमा घरबार सुरु गरेका यि जोडीको एक वर्ष वित्दैबाट खटपट सुरु भयो । दुई बर्षयता उनले श्रीमतिलाई कुटपिट गर्ने हेला गर्ने र तृरस्कार गर्दै आई रहेको सम्झनाकी बहिनी सिर्जना बोहोरा बताउँछिन ।
उनी बेपत्ता हुनुको साँझ करिव ५ बजेको समयमा दिदीले फोन गरेर सासुले घर छाडेर जा यहाँ बस्न पाईदैन भन्दै गालीगलौज गर्ने भन्दै रोएको उनको भनाइ छ ।